Wax ka baro mid ka mid ah Xiddigihii uu Saamaynta badnaa Kubadda Cagta ee Jiilkii Tagay | Somaliland Post
Home Sports Wax ka baro mid ka mid ah Xiddigihii uu Saamaynta badnaa Kubadda...
Zinedine Zidane: Xiddigani waxa loo xushay kii ugu wanaagsanaa ciyaartoyga xirfaddooda ku soo qaatay tobankii sanno ee dhexeeyay 1990kii ilaa 2000. Waxa loo qaatay xiddiggii ugu maskaxda badnaa ee wakhtigaas soo maray lana tartami kara xiddigihii magaca ku yeeshay jiilkii ka horreeyay, sida Pele, Maradone iyo Cryuff.
Dadka qaarkood ayaa ku suntay magaca “Saynisyahan”, xeel dheerida xirfaddiisa awgeed, tusaale ahaa marka la tixgeliyo adeegsigiisa maskaxda ee xirfaddiisa ku salaysnaa.
Zidane oo xirfaddiisa ka bilaabay naadiga Cannes ee Faransiiska sannadkii 1988 isaga oo da’diisu tahay 16 jir, waxaana uu wakhtigiisii ugu wanaaganaa soo qaatay sannadihii sagaashamaadkii, waxaanu ahaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ilaa wakhtigii uu kubadda cagta ka fadhiistay sannadkii 2006 isaga oo wakhtigaas da’diisu ahay soddomeeyo.
Xiddigani waxa uu ka mid noqday labada ciyaaryahan ee kaliya ee waligood saddex jeer ku guulaystay abaal-marinta FIFA ee ciyaartoyga sannadka, sannadkii 1998kiina waxa uu horkacayay xulkii Faransiiska ee ku guulaystay koobkii Adduunka waxaana lagu xusuustaa labadii gool ee ka dhaliyay xulka Brazil oo ay koobka ka qaadeen.
Saamayntii uu ku lahaa xulkiisa Faransiiska waxa ay soo gaadhay ilaa sannadkii 2000 oo uu mar labaad u hagay xulkiisa guushii ay ka gaadheen tartanka koobka Qaramada Yurub sannadkii 2000, waxaana la rumaysan yahay in xulka Faransiisku aanu wax saamayn ah yeelan wixii ka dambeeyay hawl-gabkiisa.
Ka dib guul-darradii ka soo gaadhay koobkii Adduuka ee 2006 oo Faynalkii isaga hor yimaaddeen Talyaaniga, Zidane waxa uu ka hawl-gabay xirfaddiisa isaga oo xulkiisa uga qayb-galay 108 kulan oo caalami ah oo uu ka dhaliyay 31 gool, waxaanu hawl-gabkiisu ku noqday xulka Faransiiska boog guul-darrooyin xambaarsan oo soo gebo-gebaysay taariikhdii kubadda cagta Faransiiska, in kasta oo laga yaabo inay yeesheen xiddigo muuqda balse saamayntoodu iska yar tahay.
Marka la eego guulihiisa dhanka naadiyada uu u ciyaaray, Zidane waxa uu xirfaddiisa ku soo barbaariyay kooxaha Faransiiska ah ee Cannes iyo Bordeaux. Wakhtigii uu kooxda dambe u ciyaarayay, waxay xirfaddiisu ka caawisay inay gaadhaan faynalkii 1996kii ee koobka EUFA-ha oo haatan loo bixiyay Europa League. Kooxda Juventus ayaa ku baraarugtay wacdaraha xiddigan booska dhexe ka ciyaara waxaanay ku soo iibsadeen qaddar lacageed oo dhan 3 milyan oo Gini.
Isla sannadkiiba, waxa uu Juventus u suurto-geliyay inay ku guulaystaan Horyaalka Talyaaniga iyo iyaga oo kaalinta labaad ku dhammaystay tartankii Kooxaha Horyaallada Yurub ee UEFA Champions Leauge, Sidoo kalena, Sannadkii xigay waxay Juventus ku guulaystay Horyaalka Talyaaniga. Xirfaddiisii kubadda cagta ee uu ku soo qaatay kooxda Juventus waxay soo gebo-gebayday sannadkii 2001, waxaana damac ka galay kooxda Real Madrid oo kula wareegtay xaddi lacageed oo dhan 78 milyan oo Yuuro taas oo ka dhigtay ciyaartoygii ugu qaalisanaa ee la kala iibsado wakhtigaas.
In kasta oo la ogsoon yahay in wakhtiga xirfaddiisu ka horreysay sannadihii sagaashamaadkii, wakhtigii uu u wareegay Real Madrid waxa uu noqday mid hoodo watay isaga oo sannadkii xigayba Real Madrid la qaaday koobka Champions League taas oo ka dhigtay markii ugu horreysay ee uu kor u qaado guusha koobkan. Sannadkii xigtay ee 2003, Real Madrid waxay qaadday horyaalka Spain. Wakhtigaas oo yeeshay sumcad la barbar dhigay ta kooxdiisa Real Madrid isaga oo sita Ciyaartoyga Sannadka ee Yurub, Ciyaartoyga Sannadka ee Horyaalka Talyaaniga, Ciyaartoyga ugu wanaagsan Horyaalka Faranasiiska, Ciyaartoyga ugu wanaagsan Tartanka Qaramada Yurub, laba jeer oo uu ku guulaystay Ciyaartoyga sannadka ee Faransiiska, Ciyaartoyga sannadka ee Kooxaha Yurub, Abaalmarinta Ciyaartoyga sannadka ee FIFA iyo Abaalmarinta Kubadda Dahabka ah ee FIFA. Sidaas oo ay tahay, Zidane waxa uu kubadda Cagta ka fadhiistay isaga oo ka mid ah ciyaartoygii qurxiyay isla markaana loo khushuucay taariikhda kubadda Cagta.